Madaxweynaha Jabuuti oo la dardaarmay madaxda dowladda Federalka Somalia – Somali Top News
Madaxweynaha Jabuuti oo la dardaarmay madaxda dowladda Federalka Somalia
March 17, 2019 March 17, 2019 Somali Top News	0 Comments
Madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa maanta Khudbad u jeediyay Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya.
Munaasabad kooban oo lagu qabtay Dugsiga Janaral Kaahiye waxa uu Madaxweyne Geelle uu kula hadlay Xubno isugu jiray Golaha Shacabka iyo Senetarada Aqalka sare ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya.
Waxa uu ku dheeraaday waajibaadka looga baahan yahay in ay kasoo baxaan Labada Gole, isaga oo kula dardaarmay in ay marwaliba ku dadaalaan Midnimada.
Mas’uuliyadda ugu ballaaran ee saaran Baarlamaanka Soomaaliya waxa uu ku sheegay in ay si wanaagsan ugu adeegaan dadka ay matalaan oo ka sugaya in ay Dalka u jiheeyaan Mustaqbal Wanaagsan.
Madaxweyne Geelle ayaa tilmaamay in aysan Shacabka aqbali karin kala qaybsanaan iyo in ay ka waayaan Xildhibaanada Baalmaraan waxyaabaha ay ka sugayaan, sida uu hadalka u dhigay.
Ismaaciil Cumar Geelle Madaxweynaha Jabuuti ayaa khudbadiisa inta badan diiradda ku saaray Midnimada, Hormarinta Dalka iyo mas’uuliyadda looga baahan yahay in ay kaalintooda ay ka qaataan Labada Gole ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya.
Xildhibaanada ayuu sheegay in laga doonayo in ay shacabka tusaan in ay u yihiin kuwo ugu adeegaya Mas’uuliyadda ay saarteen, sida uu hadalka u dhigay.
Mar uu ka hadlay qaxootiga Soomaalida ee dalalka kala duwan ku sugan waxa uu sheegay in uu sabab ugu dhigayo in ay waayeen Ammaanka, sidaas awgeed Cidda ay ka sugayaan in ay wax ka qabato ay tahay Dowladda, gaar ahaan Baarlamaanka.
Ismaaciil Cumar Geelle Madaxweynaha Jabuuti iyo xubno katirsan Dowladii ayaa shalay soo gaaray Magaalada Muqdisho, waxaana xalay loo sameeyay Munaasabad Casho ah, isaga isla maanta hadal dardaar u badan u jeediyay labada Gole ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya.
← Khasaaro ka dhashay dagaal saakay ilaa hadda ka socda dagmada Cadalle
Ciidamada Dowladda oo dilay sarkaal iyo askar katirsan Al shabaab →
Kenya iyo Jubbaland oo kawada xaajoonaya Darbiga Beledxaawo
Abiy Axmed ” Cabdi Ileey sharciga Itoobiya ayaan la tiigsanayaa”
Dowladda UK oo cadaadis xoogan ku heysa Madaxweyne Farmaajo kadib go’aankii Nicholas Haysom